Home Wararka Dowladda Farmaajo Runta ayey Sheegtay Markii ay tiri “Ma jiraanciidan tababar loo...
Dowladda Farmaajo Runta ayey Sheegtay Markii ay tiri “Ma jiraanciidan tababar loo Geeyey Erateriya”
Runtii aad iyo aad ayey u xanuun badan tahay waxa ay golaheenna shacbiga sameeyeen 7/2/2017,malintaas oo ay dalka ku rideen bohol mugdi ah oo ay ka dhasheen waxyaabo kala dardaran oo laga naxo. Maalintaas waxay Maxamed Cabdullahi Farmajo ka doorteen ilaa tobaneeyo murashax oo ay qaarkood aad u yaqaanneen wax qabadkooda iyo dhaliilahooda, dalkana aan halkaan iyo meel u dhow geyn lahayn. Waxaa la hubaa mid kasta oo kuwaas ka mid ah inuu dhaami lahaa Farmajo.
Xildhibaandaas kuwooda damiirka waddanimo leh maanta way ka shalleynayaan khaladkaas masiiriga ah oo ay galeen haddii aysan maanta ka shallaynna waxay ka shalleyn doonaan maalinta qiyaamo oo nafwaliba goonideeda loo xisaabin doono waxa dhashay ficilladeeda oo dhibaato iyo kheyr ah. Ficil kasta oo xun oo aad geysatay dadna saameeyey cafintiisa waxaa u shardi ah:
Towbad keen oo aad ka qoomameyso dibna aadan ugu noqon khaladkii.
Inaad cafis weydisato dadkii uu khaldkaaga saameyey.
Malintii kale oo ay khaladka kale oo weyn ay galeen waxay ahayd markey u badaleen Farmajo dartiis guddomiyahoodii Barlamanka Jawaari oo ay ku badaleen ruux runtii la garan karo inuu yahay qof xun oo aan dal iyo dad kala jecleyn ee naftiisa oo kaliya u nool waa Maxamed Mursal oo markaad fiiriso aad wejigiisa ka akhrisan karto ruuxa uu yahay.
Iyadoo ay soo dhaceen dhacdooyin kala duwan oo midba ay midda kale ka xanuun badan tahay sida qof Somali ah oo codow loo gacan geliyey, Dekadihii dalka oo dal kale loo saxeexay, dad badan oo Somaliyeed oo gacanteeda dowladda ay ku dishay kuwaas oo kala dhacay K/Galbeed, Galmudug iyo Jubaland ayaa maanta waxaa la joogaa cawaaqib kale oo weyn oo ka soo baxay dhallintii dalkaan difaaci lahayd oo laga iibsaday dal Somaliya Cadow u ah.
Dhallinyaradaas oo u soo banbaxay inay ka mid noqdaan geesiyaasha cadowga dalkaan ka difacayaa ayaa waxaa lagu wareejiyey dalal shisheeye. Xogo aan bannaanka iman weli ayaa sheegaya inay dhaallinyarada Somalida a dagaallameen Yamen, Libiya iyo Tigray oo iyada hadda la ogyahay. Xogaha oo isa soo taraya ayaa waxay Farmajo iyo Fahad wadaan inay ku dadaalaan inaysan soo bixin doorashada ka hor waana sababta hadda y u socdaan wadahallo u dhaxeeya saraakiil seddexda dal ka scoda.
Dowladda waqtigeedu dhammaaday oo isku dayeysan nay mar waliba Shacbiga ka qariso waxkasta oo ay sameyneyso ayaa ka been sheegeysay ilaa 2017-2021 jiraantaan ciidan Erateriya tababar loogu qaaday.
Haa yeshee MOL waxay ogaatay inay dowladda runta arrinkaas ka sheegeysay ma jirin ciidan Somaliyeed oo Erateriya loo qaaday ee waxaa jirtay dhallinyaro Somaliyeed oo Erateriya loo geeyey in laga dhigo calooshood u shaqeystayaal loo isticmaalo dagaallada Yamen, Liibiya iyo Tigray, waana sababta keeneysay inay ka warwareegaan jawaabta saxda Odawaa iyo rag la mid ah oo ogaan qaabka loo qaaday.
Sidaas darted xubin muhiim ah oo si fiican xaalka ula socotay oo ay MOL la hadashay ayaa u sheegtay in dhaalinyaradaan iyo waalidkoodba la khalday oo loo sheegay inay badankood tagayaan dalka Qatar oo ay ka shaqeyn doonaan Ciyaaraha adduunka, waxaana soo qoristooda looga qaatay lacago laaluush ah. Waxaa jira xildhibaanno iyo dad magac leh oo xataa laaluush ku qaatay inay reerahooda ka soo qoraan dhallinyaradaan laga dhigayo calooshood u shaqeystayaal.
MOL ayaa waxay ku dabajirtaa inay hesho magacyada xildhibaanada, masuuliyiinta wasaaradda Gaashaandhigga, NISA iyo oday dhaqameedyada arrinkaan ku lug lahaa si marka sharciga iyo kala dambeynta soo noqoto doorashada kadib caddaallada loo horkeeno.